EXP GDC BEAST v8.0 လက်ပ်တော့ပ်၏ပြင်ပဗွီဒီယိုကဒ်အဒက်တာ ...
mini ကို PC များ
ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယိုနှင့်အသံ technique ကို
TV နဲ့ TV ကို set ကို-top box
installed ကင်မရာများ° 360
ပလပ်စတစ် 3D ပုံနှိပ်ပါ
ရေဒီယို-controlled device များ
ကားတစ်စီးဆက်စပ်ပစ္စည်း, GPS, မာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ
Aliexpress E ကိုလမ်းပြ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း, စျေးဝယ်, ဘာသာစကား Lithuanian, ယူရိုအတွက်စျေးနှုန်းများကိုအကူအညီတာဝန်များကိုအငြင်းပွားမှုများ။
Alitools - နောက်ဆက်တွဲအင်တာနက် browser
MEPS CashBack - 20% အထိထုတ်ကုန်များအတွက်ပေးဆောင်ပမာဏကို recover
Chrome က extension များ
automatic Aliexpress ကူပွန်ဘို့ရှာဖွေရေး
Alitools - Aliexpress စျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြေရာခံခြင်း, ရောင်းသူ, validation ကို
GoDaddy 1 $ / လ + အခမဲ့ဒိုမိန်း
အစကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ပျူတာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများEXP GDC BEAST v8.0 လက်ပ်တော့ပြင်ပဂရပ်ဖစ်ကဒ် adapter
EXP GDC BEAST v8.0 လက်ပ်တော့ပြင်ပဂရပ်ဖစ်ကဒ် adapter
လိုချင်သောစာရင်းသို့ထည့်သွင်းပါလိုချင်သောစာရင်းမှ Addedလိုချင်သောစာရင်းထဲကနေဖယ်ရှား 2
နောက်ဆုံး ၂၀၁၀ မေလ ၁ ရက်၊
စျေးနှုန်းသမိုင်း EXP GDC Express ကိုကတ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Signal လိုင်းအမျိုးအစား 34 / 54 Interface
€ 17,45 - မေလ 2020, 7
€ 15,82 - ဇန်နဝါရီလ 2020, 19
မှ: 2020 ဇန်နဝါရီလ 19
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 17,45 - မေလ 2020, 7
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 15,82 - ဇန်နဝါရီလ 2020, 19
EXP GDC Express ကိုကတ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Signal လိုင်းအမျိုးအစား 34 / 54 Interface
အတူလိုက်ဖက်တဲ့ EXP သားရဲ GDC လွတ်လပ်သောပြင်ပ Laptop ကိုဗီဒီယိုကဒ် Expresscard အထိုင် + Cable ကို ...
[Expresscard ဗားရှင်း] V8.0 EXP GDC လွတ်လပ်သောပြင်ပ Laptop ကိုဗီဒီယိုကဒ်အထိုင်
လွတ်လပ်သောပြင်ပ Laptop ကိုဗီဒီယိုကဒ်ဂရစ်ဖစ်အထိုင်
EXP GDC BEAST Gaming Laptop ကို (eGPU Set-အထိ)
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: EXP GDC BEAST v8.0 လက်ပ်တော့ပြင်ပဂရပ်ဖစ်ကဒ် adapter
1 EXP သားရဲ GDC လွတ်လပ်သောပြင်ပ Laptop ကိုဗီဒီယိုကဒ်အထိုင်, Cable ကို Expresscard 1, 1 ATX Cable ကို x x, 1 တရုတ်လက်စွဲစာအုပ် x x
EXP GDC BEAST v8.0 Laptop ကိုပြင်ပကဗီဒီယိုကဒ် adapter ဗီဒီယိုများ
အဘို့အ3ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း EXP GDC BEAST v8.0 လက်ပ်တော့ပြင်ပဂရပ်ဖစ်ကဒ် adapter
0.05ထံမှ
အားလုံးပြရန် အများဆုံးအသုံးဝင် အမြင့်ဆုံးခဲ့သည် Rating နိမ့်ဆုံးခဲ့သည် Rating
guillaume - 2019 10 ဇွန်
Utiliser sur un Lenovo က T420 avec Une လှည်းကိုဗီဒီယို HD7850Tout fonctionne parfaitement, Connect sur la လှည်း et le သားရဲအပေါ်နျဌာနခှဲ l'Express ကိုကတ်, et les et ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် un redémarrage fonctionne drivers တွေကို install အပေါ် ensuite ပေါ်မှာ။ Une သင်အလွယ်တကူdébrancher utiliser votre ခရီးဆောင် ou vous Voulez လိမ့်မည် l'express ကိုကဒ် fois! တစ် joue en plusieurs jeux et c'est très 1080p အရည်အတွက် le Prix, meilleur moyen က de ဂိမ်း avec un ခရီးဆောင်လောင်း။ нет
အဲလက်စ် - 2019 10 ဇွန်
Отличноерешениечтобы "прокачать" свойноутидобавитьемупроизводительности, атакжеподключитьнесколько (большедвух) мониторов.Проверил - реальноеработает! Исамоеглавное, работаетврежимерасширениярабочегостолананесколькомониторов။ Да, дляработынуженблокпитания, т.к. онвданныйкомплектневходит။ Номожновзятьобычныйотнастольногокомпа, думаюдажедлясамоймощнойвидеокартыдолжнохватитьблокана 450 Ватт။ Однозначнорекомендую, онотогостоит! အဆိုပါ GPU ကိုသငျသညျပြင်ပမှကြောင့်အသုံးပြုတဲ့အခါတစ်ခုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်ယူပါဘူး။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင့်ရဲ့ Laptop ကို CPU ကိုဆို့နေသောလိမ့်မည်ကိုလည်းအများဆုံးလျောက်ပတ်သောကတ်များရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်မျှော်မှန်းထားခံရဖို့ရဲ့။ သို့တိုင်ကကြီးမြတ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျော့ခ်ျ - 2019 10 ဇွန်
1: ငါနှစ်ခုအကြောင်းရင်းများအတွက် EXP GDC သားရဲအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ gaming.2 အဘို့အကြှနျုပျ၏လက်ပ်တော့ကိုအသုံးချနိုင်မှ။ function ကိုအဘို့အဂရပ်ဖစ်များနှင့်အခြား PCIe ကတ်များကိုစစ်ဆေးနိုင် ---- 1 ။ ကဒ်သာ PCIe x1 နှင့်အတူချိတ်ဆက် altough ဂိမ်း, မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ငါအသုံးဝင်သောဖလက်ပြကွက်အမြန်နှုန်းနှင့်အတူအလတ်စား setting များကိုအတူ 3d သေနတ်သမားကစားနိုင်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဂိမ်းဟာဘက်ပေါင်းစုံဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်အတူဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်း trips.2 အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတဲ့အခါမှာဒါဟာငါ့အဘို့စုံလင်သည်။ ငါ၏အ desktop ကွန်ပျူတာ၏ဖြစ်ရပ်ဖွင့်စရာမလိုဘဲ allways PCIe ကတ်များကိုစစ်ဆေးခြင်းငါ့အဘို့အားသာချက်အနှံ့ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ ဒါဟာအများကြီးကူညီပေးသည်နှင့်အကောင်းတစ်ဦး power supply အားဖြင့်သင်တို့ကို allmost တိုင်း PCIe ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဘယ်သူအားမျှ
ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးရန် ပြန်ကြားချက် Cancel
သင့်ရဲ့ခဲ့သည် Rating rate ... စုံလင်သော ကောင်းသော ပျမ်းမျှ ကမဆိုး အလွန်ညံ့ဖျင်း
သင့်ရဲ့ခဲ့သည် Rating *
Xiaomi က 2nd နားကြပ်
နောက်ခံအလင်း RGB နှင့်အတူ Motospeed Inflictor CK104 စက်မှုကီးဘုတ်
RGB နောက်ခံအလင်းနှင့်အတူ Ajazz MP02 mouse ကို pad ပါ
BM-800 condenser မိုက်ကရိုဖုန်း
Huion H420 WACOM အမျိုးအစား digital တက်ဘလက်
Xiaomi က Pro ကို HD ကိုနားကြပ်
သံလိုက် Neo ကို Cube, 216 ဘောလုံး
SYL-08 2000W လျှပ်စစ်စကိတ်စီး (40km / ဇ, 30km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Youtube ကိုဒီမှာနှိပ်ပါ။
မသန်မစွမ်း Mega-S ကို 3D ပရင်တာ I3 Mega အကြီးစားအဆင့်မြင့်အရွယ်အစားအပြည့်အဝသတ္တု TFT ထိတွေ့မျက်နှာပြင် 3D Drucker
မသန်မစွမ်း Mega-S ကို 3D ပရင်တာ I3 Mega ကိုအကြီးစား Plus အရွယ်အစားအပြည့်အဝသတ္တု TFT ထိတွေ့မျက်နှာပြင် 3D Drucker Upgrade ...
Oneplus 7T 4G Phablet 6.55 လက်မအောက်ဆီဂျင် OS သည် Android 10 Snapdragon အပေါ် အခြေခံ၍ 855 Plus Octa Core 8GB RAM 128GB ROM 3800mAh ဘက်ထရီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗားရှင်း
Oneplus 7T 4G Phablet 6.55 လက်မအရွယ် Android 10 Snapdragon အပေါ်အခြေခံသည့်အောက်ဆီဂျင် OS 855 Plus Octa Core 8GB RAM ...
Alfawise U20 အကြီးစား 2.8 လက်မ touch screen DIY 3D ပရင်တာ - အီးယူ
Alfawise U20 အကြီးစား 2.8 လက်မထိတွေ့မျက်နှာပြင် DIY 3D Printer - EU ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ...
မူလစာမျက်နှာ 50 အလိုအလျောက် APP ကိုစမတ်စီစဉ်ထားလောကထဲကလူတော်တော်များများအဘို့အ Roborock S2 Xiaomi က MI စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်
အိမ်တွင်းအလိုအလျောက်မြုပ်နှံခြင်းအတွက် APP Smart Planned Roborock S50 Xiaomi MI စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက် ၂ ...
Xiaomi youpin မှ Oclean X Smart Color Touch Screen Sonic Electric သွားတိုက်တံကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူကွဲ
Oclean X စမတ်အရောင်မျက်နှာပြင် Sonic Electric သွားတိုက်တံကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗားရှင်း ...
Fengmi 4K ရုပ်ရှင်ရုံ Ultra Short Throw Laser Projector (Xiaomi Ecosystem Product)
Fengmi 4K ရုပ်ရှင်ရုံ Ultra Short Throw Laser Projector (Xiaomi Ecosystem Product) ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ...
Hubsan ZINO Pro GPS 5G WiFi 4KM FPV UHD 4K 3-axis Gimbal RC Camera မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Quadcopter ဖြုတ်တပ်နိုင်သော Filter Camera Panorama Photography Mode
Hubsan ZINO Pro GPS 5G WiFi 4KM FPV UHD 4K ၀ င်ရိုး ၃ ခုရှိ Gimbal RC Camera မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Quadcopter ...
Tenpigiau.lt အီလက်ထရွန်းနစ်၏ကျယ်ပြန့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုအာရုံစူးစိုက်သောကုန်စည်စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီနေရာတွင်မသာဈေးအပေါဆုံးထုတ်ကုန်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လည်းစျေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်ဖို့, ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ခြင်းငှါသင့်လျော်အချိန်ပေါ်ဆုံးဖြတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ပြည်ပမှာက e-စျေးဝယ်ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။စျေးဆိုင်များနှင့်အများကြီးပို ...
ကျနော်တို့ Hostinger.lt အကြံပြု
Tenpigiau.lt © 2017-2020m ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာ: အင်ဖို @tenpigiau.lt